Fitantanana an’Antananarivo :: Teny baikon’Andriantsitohaina Naina ny fanarahan-dalàna eto an-drenivohitra • AoRaha
Fitantanana an’Antananarivo Teny baikon’Andriantsitohaina Naina ny fanarahan-dalàna eto an-drenivohitra
Ho renivohitra tan-dalàna amin’izay Antananarivo. Io no velirano voalohany napetraky ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra vaovao, Andriantsitohaina Naina, vantany vao nandray ny toerany, tetsy amin’ny
Lapan’ny tanànan’Analakely izy, omaly tolakandro.
“Tsy misy afa-tsy ny fame­trahana ny fanarahan-dalàna no hahafahana mampandroso ny tanànantsika. Tsy manana fahavalo, na olona, na antoko na firehan-kevitra. Ny fahava­loko dia ny loto sy ny fako, ny tondra-drano , ny fihotsahan’ ny tany… fa indrindra ny tsy fanarahan-dalàna”, hoy izy, taorian’ny fametrahana tamin’ ny fomba ofisialy ny sambo­ady maha Ben’ny tanànan’ny kaominina Antananarivo renivohitra azy.
Nametraka fepetra vonjimaika mialoha ny fanatante­rahana an’ireo asa goavana miandry azy sahady ny Ben’ ny tanàna vaovao. Lohalaharana ary efa nampiharina, ny fanalana an’ireo mpivarotra eny amoron-dalana amin’ireo toerana be mpivezivezy.
“Hitantsika fa ny mpivarotra amoron-dalana no mampitohana ny fifamoivoizana. Na tsy hisy aza aloha ny fandroahana faobe dia fantatsika fa misy ireo toerana tsy azo andeferana ka mangataka ny fahatsapan-tenantsika tsirairay mba tsy hampiasa ireny toerana an’ireny ho fivarotana”, hoy ny Ben’ny tanàna, Andriantsitohaina Naina.
Nanomboka tamin’ny talata teo no efa nambenana tsy namelana an’ireo mpiva­rotra hametraka ny entany amin’ireo toerana maromaro eto an-drenivohitra ny Polisy monisipaly sy ireo avy amin’ ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena. Notsindrian’ny Ben’ny tanànan’ Antananarivo fa tsy maintsy hisy ny fanamboarana tsena ho an’ireo mpivarotra ireo saingy tsy ho vita ao anatin’ ny andro vitsy izany. “Aoka ihany koa isika mpitondra fiara, na ny taksibe, na ny posy na ny sarety mba hifanaja”, hoy hatrany izy.
Hentitra ny Ben’ny tanàna vaovao raha nilaza fa: “ho­ampitomboina ny sazy ho an’ireo tsy manara-dalàna, toy ny amin’ny fifamoivoizana eto Iarivo”. Nanainga ny mponina eto an-drenivohitra mba hanadio ny tanàna misy azy sy tsy hanary ny fako amin’ireo lakandrano ary koa hanaja ny ora fanariana fako, Andriantsitohaina Naina. “Hampiana ireo mpanadio ny tanàna, amin’ny alalan’ny asa tana-maro. Hampiana koa ny fitaovana fanadiovana ny tanàna”, araka ny fampa­nantenana nataony.
Nampahafantatra ny fan­draisana fepetra hentitra amin’ny ireo trano tsy ara-dalàna manentsina an’ireo lakandrano sy ny fanotofana tany tsy ara-dalàna indray ny Ben’ny tanànan’Antananarivo vaovao. Ho an’ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny kaominina kosa dia namba­rany fa haverina ny hasin’ny tanànan’Antananarivo ka tokony ho fitaratra eo imason’ ny fiarahamonina amin’ny fanajàna ny asany ireo mpiasa ao amin’ny Lapan’ny tanàna.
Niantso an’ireo mpandraharaha hanampy azy ny Ben’ ny tanàna sady nanindry mafy fa tokony hatao ao ana­tin’ny fanarahan-dalàna ny fandraharahana eto an-dreni­vohitra. “Izao vao tena tonga ny fotoana hanarenana ny renivohitra. Andao isika hiara-hientana sy hiara-hiasa ho an’ ny tombontsoan’ny mponina eto Iarivo”, hoy ihany izy.
Omaly maraina no vita ny famindram-pahefana teo aminy sy ny Ben’ny tanàna teo aloha, Ravalomanana Lalao.
CAN 2021 :: Hanahirana an’ireo firenena afrikana ny haka mpila ravinahitra
Tontolon’ny asam-panjakana :: Ho tapaka karama ireo mpiasa “matoatoa” roa alina mahery